Kuwait ayaa ka Mamnuucday Safarada Shisheeye dhamaan Muwaadiniinta aan la talaalin
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Kuweyt Kuweyt » Kuwait ayaa ka Mamnuucday Safarada Shisheeye dhamaan Muwaadiniinta aan la talaalin
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Wararka Kuweyt Kuweyt • News • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Kuweyt waxay ka mamnuucaysaa dhammaan socdaalka shisheeyaha dhammaan muwaadiniinta aan la tallaalin
Mamnuuca bustaha saaran safarada dibada ee dhamaan muwaadiniinta reer Kuweyt ee aan la talaalin ayaa maanta ay ku dhawaaqeen maamulka.
Kaliya muwaadiniinta Kuwait ee la talaalay ayaa loo ogolaaday inay u safraan dibada.
Mamnuuca safarka wuxuu dhaqan galayaa Ogosto 1.
Carruurta ka yar 16 sano waa laga dhaafay sharciga cusub.
Masuuliyiinta Kuwait ayaa ku dhawaaqay in kaliya muwaadiniinta reer Kuwait ee la talaalay loo ogolaan doono inay u safraan dibada, taasoo si wax ku ool ah u aas aaseysa qeyb weyn oo ka mid ah 4.2 milyan oo qof.
Go'aankii bustaha ahaa ee laga mamnuucay safarka dibedda ee muwaadiniinta aan la tallaalin ayaa waxaa ku dhawaaqay saraakiisha dowladda ee waddamada Khaliijka maanta. Laga bilaabo Ogosto 1, shakhsiyaadka la tallaalay oo keliya ayaa loo oggolaan doonaa inay u baxaan safaro dibadeed.
Si kastaba ha noqotee, carruurta ka yar 16, dadka qaba xaaladaha caafimaad ee ka hortagga tallaalka, iyo haweenka uurka leh ayaa laga dhaafi doonaa sharciga cusub waxaana loo oggolaan doonaa inay safraan haddii ay caddeyn sax ah ka helaan wasaaradda caafimaadka ee qaranka.
Tallaabadan ayaa si wax ku ool ah ugu saleyneysa tiro ballaaran oo ka mid ah dadka reer Kuweyt xayiraadda safarka shisheeye. Sida laga soo xigtay xogta ugu dambeysay ee la heli karo, Kuwait ayaa qaadatay in kabadan 2.3 milyan oo qaadasho oo ah tallaalka COVID-19, iyadoo ilaa hal milyan oo qof illaa iyo hadda - in kabadan 22% dadweynaha - ay helayaan laba tallaal.
In kasta oo ku dhawaaqistu aysan si sax ah u caddeyn arrintaan, haddana waxay sida muuqata ka dhigan tahay in dadka tallaalka buuxa oo keliya loo oggolaan doono inay safraan ka dib marka ay tallaabadu dhaqan gasho bisha soo socota.
Tan iyo bilowgii cudurkan, Kuweyt waxay diiwaan galisay in ka badan 394,000 oo kiis COVID-19, iyadoo ku dhowaad 2,300 oo qof ay u dhinteen cudurka.